Mitondra an'i Eropa any Myanmar: sinema eropeana tsara indrindra any Yangon
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mitondra an'i Eropa any Myanmar: sinema eropeana tsara indrindra any Yangon
Septambra 17, 2018
• fidirana maimaim-poana amin'ny horonantsary 17 nahazo loka tamin'ny alalàn'ny Eropa tamin'ny 21 - 30 Septambra
• Fetiben'ny horonantsary vahiny naharitra ela indrindra tao Myanmar - Fetiben'ny horonantsary eropeana faha-27 ao Yangon
• Toerana 2: Sinema Nay Pyi Taw (Lalana Pagoda 242 - 248) sy Goethe Villa (Làlana Pagar Kabe Aye Pagoda, zoro Nat Maukuk)
Yangon, 17 septambra 2018 - Sambory ny sarimihetsika ankehitriny 17 avy amin'ny lafivalon'i Eropa amin'ny Fetiben'ny horonantsary eropeana faha-27 any Yangon. Nokarakarain'ny Delegasion'ny Vondrona Eropeana tany Myanmar sy ny Goethe Institute Myanmar, niaraka tamin'ny fandraisana anjara avy amin'ny firenena eropeana 17, ny Festival Film Eropa Yangon 2018 dia natao tamin'ny 21-30 septambra. Misokatra ho an'ny daholobe maimaim-poana ao amin'ny Goethe Villa sy Nay Pyi Taw Cinema ny fandefasana horonantsary.
Ny fetibe horonantsary eropeana fanao isan-taona no festival vahiny naharitra indrindra teto Myanmar. Izy io dia mikendry ny hampiroborobo ny fifanakalozana kolontsaina misy eo amin'i Myanmar sy i Eoropa ary mampiseho ny maha-samihafa ny sinema eropeana.
Raha niresaka tamin'ny fampahalalana tamin'ny haino aman-jery tany Yangon, HE Kristian Schmidt, masoivohon'ny Vondrona eropeana any Myanmar dia nilaza hoe: “Ny sarimihetsika eropeana dia manana ny mampiavaka azy manokana. Matetika izy ireo dia mahatsikaiky, tsy ampoizina ary mahalana no mahery fo. Saingy io no nahatonga ny tantaran'izy ireo nahaliana sy nifandray tamin'ny rehetra. ”
"Manantena izahay fa ny Fetiben'ny horonantsary eropeana dia hampiseho amin'ireo vahininay fa ambanin'ny fahasamihafana ara-kolontsaintsika dia manana zanak'olombelona iraisana isika rehetra," hoy izy nanampy.
Nanakoako ny tenin'ny Masoivoho, Auntie Grace (Swe Zin Htike), nahazo ny lokan'ny Akademia Myanmar, fa “varavarana mahafinaritra ho an'izao tontolo izao ny sinema. Ny sarimihetsika dia mitondra antsika any amin'ny toerana vaovao sy kolontsaina samihafa. Sehatra ifandraisana, ho an'ny fianarana ary ho an'ny fandriampahalemana ny kanto. Ny artista toa antsika dia misy fitaomana manerantany. Afaka manampy amin'ny fananganana fifandraisana eo amin'ny olona na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao isika. ”
Ny sarimihetsika frantsay “Django” dia manokatra ny festival amin'ity taona ity amin'ny 21 septambra ao amin'ny Sinema Nay Pyi Taw ao afovoan-tanàna Yangon. Ny debut voalohany an'ny mpamokatra horonantsary Étienne Comar, Django, dia mifototra amin'ny fiainana miavaka an'ny angano jazz Django Reinhardt.
“Django dia biolojika ara-tantara iray izay hitarika an-tsitrapo ny mpijery any Frantsa amin'ny ady amin'ny taona 1940. Raisina ho iray amin'ireo mpitendry gitara lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra, nitondra fifaliana i Django Reinhardt ary nitondra ny olona hitsangana miaraka amin'ny mozikany Gypsy-Jazz nandritra ny fotoana tena sarotra. Manantena izahay fa ho tian'ity mpihetsiketsika ao Myanmar ity horonantsary ity sy ny feon-kira manintona azy, ”hoy Andriamatoa Franz Xaver Augustin, Talen'ny Goethe Institute Myanmar.
Maimaimpoana ny tapakila ho an'ireo horonantsary ary azo alaina amin'ny voalohany, voalohany notompoina tao
IG Asia Partners Singapore Airlines KrisFlyer no mpivarotra voalohany nanolotra kilometatra maro
Hisokatra ao Leshan, Sina ny Expo faha-5 an'ny Sichuan International Travel Expo